MSI Dragon Center App ကို Pro ကျကျ ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်မလဲ?
MSI Gaming Laptop တွေရဲ့ Dragon Center ကို Pro ကျကျ ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ?
ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ MSI Laptop တွေမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ Dragon Center (Laptop တစ်ခုလုံးရဲ့ Control Center) အကြောင်းကို ဂယနဏ ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း GT ၊ GS ၊ GE ၊ GP ၊ GL/GF နဲ့ Alpha စီးရီးဆိုပြီး မော်ဒယ်နာမည် ခွဲထုတ်ထားပေမယ့် Dragon Centre လုပ်ဆောင်ချက်က အတူတူပါပဲ။
စာဖတ်သူတွေ နားရှုပ်မစိုးလို့ စကားပလ္လင်ခံရတာဖြစ်ပြီး Gaming Laptop တစ်လုံးအတွက် အရေးပါဆုံး ဦးနှောက် သို့တည်းမဟုတ် စက်စွမ်းဆောင်ရည် ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Control Center ကို ကျနော်တို့ ဘယ်လို ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်မလဲ လေ့လာကြည့်တာပေါ့။
ဒီတော့ နဂါးဌာနချုပ်ဆိုတာဘာလဲ? သူ့ Control System မပါဘဲနဲ့ရော အသုံးပြုနိုင်သလား? ဒီမေးခွန်းဖြေရရင် ရပါတယ်၊ သာမန်အတွက် အသုံးပြုတဲ့အချိန် မသိသာပေမယ့် ဂိမ်းကစားတဲ့အခါ၊ Edit ကိုင်တဲ့အခါ ပြဿနာ စပါလိမ့်မယ်။
အများစု ညည်းကြတာ အပူ (Heat) ဖြစ်ပြီး လက်တင်တဲ့နေရာတွေနဲ့ Keyboard တချို့နေရာတွေက Hot Zone ဖြစ်လာတယ်၊ နောက်တချက်က အပူလျှော့ချပေးဖို့ တာဝန်ယူထားရတဲ့ ပန်ကာတွေ ဝန်ပိပြီး အလုပ်ပိုလုပ်ရတဲ့အတွက် သာမန်ထက် ပိုလည်တယ် (Fan Speed များလာတော့ ပန်ကာသံကျယ်တယ် စသဖြင့် Negative Feedback ပြောကြပါတယ်)
ဒီလိုဖြစ်တာ အကြောင်းပြချက် ၂ ချက် ခိုင်လုံမှ အပူ ပြဿနာ ရှိမှာပါ။ Gaming Machine တစ်လုံးအတွက် အပူက မဖြစ်မနေ တက်မှာဖြစ်ပေမယ့် Laptop အများစု Cooling Solution ကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း သုံးပေးထားပါတယ်။
ဆိုကြပါစို့ GTX 1650 GPU အတွက် အပူစုပ်ပိုက် ၂ ချောင်းက Sufficient ဖြစ်ပေမယ့် RTX 2070 ၊ 2080 လို Chip မျိုးအတွက်ကျ မလုံလောက်ပါဘူး။ ဒိအတွက် MSI မှာ GE ၊ GS မော်ဒယ်နှစ်ခု Thermal Solution မတူသလို GP ၊ GL တို့ရဲ့ Construction ပိုင်း ကွာခြားမှုတွေ ရှိပါတယ်။
ပြောချင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်က GS နဲ့ GE မှာ RTX 2060 သုံးထားတာချင်းတူရင်တောင် ဒီ Laptop နှစ်လုံး Thermal Performance မတူသလို GP နဲ့ GL တို့မှာလည်း အလားတူပါပဲ။ ကျနော့်အနေနဲ့ အကြုံပြုလိုတာက သုံးစွဲနိုင်တဲ့ ငွေကြေးအလိုက် နှစ်သက်ရာ မော်ဒယ်ကို ရွေးချယ်ပါ (GP သုံးထားပြီး GE Thermal စွမ်းဆောင်ရည် ရှိမယ်လို့ တွက်ထားလို့မရလို့ပါ)
မော်ဒယ်မြင့်လေ ပိုကောင်းလေဆိုပေမယ့် Price-to-performance စဥ်းစားရင် GP Series တွေက သုံးပျော်ပါတယ်။ ဒီတော့ Laptop မော်ဒယ်အလိုက် Thermal Performance မတူတာ သိသွားပြီရင် အခြေခံအကျဆုံး Control Centre ကို ဆက်ပါမယ်။
The MSI Dragon Center
ဒီ Application က MSI Laptop တိုင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ System Analyzer ၊ Turner လို့ ပြောနိုင်သလို System Control ပိုင်း ခေါင်ချုပ်လို့လည်း သုံးနှုန်းနိုင်ပါတယ်။ အများစုက ရှုပ်ထွေးပွေလီပြီး နားလည်မလွယ်တဲ့ Interface ကြောင့် ဘယ်လို သုံးရမလဲ အခက်တွေ့ကြတာပါ။
ပြောရရင် User Friendly မဖြစ်ပေမယ့် အသုံးဝင်တဲ့ Features တွေနဲ့ Tools တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဘယ်လို စွမ်းဆောင်နိုင်သလဲ အကြမ်းဖျင်းပြောရရင် ခုန အပူတက်တဲ့ ပြဿနာကို Dragon Centre ကနေ လျှော့ချပေးနိုင်တယ်။
စိုးစဥ်းမျှ (Comfort Zone) ရောက်တဲ့အထိ လျှော့ပေးနိုင်တယ် မဆိုလိုပေမယ့် သုံးစွဲသူတွေအတွက် သက်တောင့်သက်သာ အသုံးပြုနိုင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ ဒိထက်ပိုပြီး Comfort ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ CPU နဲ့ GPU ကို Manually Undervolted လုပ်ဖို့ လိုပါမယ် (ဒီအပိုင်းကိုတော့ ထည့်မပြောတော့ပါဘူး)
အရင်ဆုံး စာဖတ်သူတွေ နားလည် သဘောပေါက်သွားအောင် Interface က စပြီး ပြောပါမယ်။
App ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ပထမဆုံး မြင်ရမှာက System တစ်ခုလုံးကို Monitor လုပ်နေတဲ့ Interface လေးပါ။ ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ Laptop အချက်လက်နဲ့ Loading Status ၊ Fan Speed ကို ဖော်ပြထားမှာ ဖြစ်ပြီး CPU နဲ့ GPU အပူချိန် ဘယ်လောက်ရှိနေလဲ? ဘယ်လောက် Frequency နဲ့ Run နေလဲ Detail နှိပ်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
System Memory နဲ့ Disk Functionality ပိုင်းမှာတော့ Auto Clean Up လုပ်ပေးမယ့် Feature ထည့်ပေးထားပြီး စာဖတ်သူတွေ ဂိမ်းကစားမယ့်အခါဖြစ်ဖြစ် OS ထဲက မလိုအပ်တဲ့ Files ဖျက်ချင်တဲ့အခါ Dragon Centre ကနေ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အိုကေ ဒုတိယ အနေနဲ့ ပါဝင်လာတာ Performance Interface ပါ။ Dragon Center Current ၊ Performance ၊ Theatre နဲ့ Profile ဆိုပြီး Tab ၄ မျိုး ထည့်ထားပေမယ့် ကျနော်ကတော့ Manually အသုံးပြုရတာ ကြိုက်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Tab မျိုးစုံခွဲထည့်ထားပေမယ့် ဆိုလိုရင်းက အတူတူပါ၊ ဘယ်လိုလဲဆိုရင် Laptop Performance ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ Shift မှာ Turbo ၊ Sport ၊ Comfort နဲ့ Eco ဆိုပြီး Mode ၄ မျိုး ခွဲထားသလို Tab ၄ မျိုးကလည်း ဒီ Performance Shift ၄ မျိုးကို ခေါင်းစဥ်ခွဲပြီး သုံးထားလို့ပါ။
ဒီတော့ Performance နဲ့ Energy Efficient ဖြစ်မယ့်အပိုင်းကို ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင် Comfort က အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်တင်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Turbo နဲ့ Run နိုင်ပါတယ်။ သတိပြုစရာ အချက်က Turbo Mode က Unlock Tier ဖြစ်တဲ့အတွက် CPU နဲ့ GPU တို့ Turbo Frequency များများနဲ့ Run နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါမယ့်လည်း Core Temperature ပေါ်မူတည်ပြီး Boost လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Fan Control လိုလာမှာပါ။ ဒိအတွက် Fan Speed ကို Auto ၊ Basic ၊ Advanced နဲ့ Cooler Boost လုပ်ဆောင်ချက် ၄ မျိုး ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ကျနော် ရှင်းပြနေတဲ့ Turbo Power Mode က Cooler Boost နဲ့ အကိုက်ဆုံးဖြစ်ပြီး ကျယ်လောင်နေတဲ့ ပန်ကာသံ (6,500 ~ 7,000 RPM) က အနှောက်ယှက် ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း System Performance ပိုကောင်းသလို CPU နဲ့ GPU တို့တတွေလည်း Core Temperature အများကြီးနဲ့ မ Run ရပါဘူး။
အခုလို Cooler Boost နဲ့ Cool Down လုပ်တာ ရေရှည်တွက် မကိုက်သလို ကျယ်လောင်နေတဲ့ ပန်ကာသံက Annoying ပါ။ ကျနော်လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ GS65 9SD မှာ Cooler Boost ဖွင့်ချလိုက်ရင် CPU နဲ့ GPU အပူချိန်က 60°C ဝန်းကျင်ပဲ ရှိပါတော့တယ် (ပြောရရင် Desktop Temperature နားကပ်နေပါပြီ)
ဒါမယ့်လည်း နားညည်းတဲ့ဒဏ်မခံနိုင်လို့ Advanced Mode ကိုပဲ သုံးဖြစ်ပြီး Fan Speed ကို Manually Control လုပ်ထားပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျနော်လက်ရှိ သုံးဖြစ်နေတဲ့ Advanced Fan Control အနေထားပါ။
စာဖတ်သူတွေ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ Adjust လုပ်တတ်ဖို့ နားလည် အောင် ပြောရရင် အပြာရောင်ကနေ လိမ္မော်ရောင် တားထားပေးတဲ့ ကာလာလိုင်းက CPU နဲ့ GPU အပူချိန်ကို ဖော်ပြတာဖြစ်ပြီး ညာဖက်ဆုံးမှာ မီးထတောက်မယ်လို့ သတိပေးထားပါတယ်။
ဆိုလိုတာ အပြာရောင်က Idle State ကို ရည်ညွန်းတာဖြစ်ပြီး အဝါရောင်ဖက် မကူးခင် စပ်ကြားက Comfort Zone ပါ။ CPU အနေနဲ့ Turbo Frequency ကောင်းကောင်းတင်ပေးနိုင်တဲ့ Zone ဖြစ်လို့ အဲ့အပူချိန်တွင်း (50°C ~ 55°C Range အတွင်း) ရှိနေရင် အကောင်းဆုံးပါ။
အဝါ၊ လိမ္မော်ဖက် ရောက်လာရင် 60°C အထက်ဖြစ်သွားပြီလို့ ရည်ညွန်းတာ ဖြစ်ပြီး အဲ့အတိုင်းတာမှာ Fan Speed တင်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးက Comfort Zone မှာ Fan Speed ကို 50% မဟုတ်ဘဲ 60% ၊ 70% ထားပေးတာက System Performance ကို Stable ဖြစ်အောင် ထိန်းထားပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆိုလိုချင်တာ ပူလာမှ Cooler Boost ထဖွင့်ပြီး တဖူးဖူး မှုတ်ခိုင်းတာထက် CPU တစ်လုံး Turbo Frequency တင်ပေးနိုင်တဲ့ အပူချိန် (Comfort Zone) မှာ ထိန်းပေးတာက အကောင်းဆုံးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ CPU သဘောတရားကိုက အပူချိန်မြင့်လေ Throttle ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် အလဟသ ကုန်ဆုံးမှုမျိုး မဖြစ်ရအောင် Advanced Mode ကို သုံးစေချင်ပါတယ်။
GS65 9SD နဲ့ ဥပမာပေးရရင် i7-9750H ဟာ ဂိမ်းကစားတဲ့အခါ နဲ့ Edit ကိုင်တဲ့အခါ 3.5GHz (6-cores Turbo) အထိ Boost လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမယ့်လည်း ဒီ Frequency က 67°C (Max 70°C) မှာပဲ ရတဲ့အတွက် အဲ့ထက် မကျော်သွားရအောင် 10 မိနစ် Test Run နဲ့ CPU အပူချိန်နဲ့ Fan Speed ကို စောင့်ကြည့်ပါတယ်။
RPM 4,000 ဝန်းကျင်မှာ 67°C မကျော်အောင် ထိန်းနိုင်တဲ့အတွက် Advanced Mode မှာ 50% ပဲ ထားရပါတယ်။ ဒီအချက်က တခြား မော်ဒယ်တွေနဲ့ တူချင်မှ တူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သုံးစွဲသူတွေ Adjust လုပ်ချင်ရင် ဂိမ်း သို့မဟုတ် Heavy Loading ကို ၁၀ မိနစ် သို့မဟုတ် ၁၅ မိနစ် Run စေပြီး CPU အပူချိန်နဲ့ Fan Speed ကို စောင့်ကြည့်ပါ။
CPU အမြင့်ဆုံး Run နိုင်တဲ့ Frequency နဲ့ Temperature ကို မှတ်သားပြီး Fan Speed ကို ရလာတဲ့အပူချိန်မှာ ထိန်းထားနိုင်တဲ့ % အထိ နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ် စမ်းသပ်ပြီး အသုံးပြုကြည့်ပါ။ ဒီလိုပဲ GPU ကိုလည်း CPU နည်းတူ ကစားနိုင်ပါတယ်။
GS65 9SD ရဲ့ GTX 1660 Ti ဟာ Core Frequency ကို 1,590 MHz Boost လုပ်တယ်လို့ Default အဖြစ် ဖော်ပြထားပေမယ့် MSI Afterburner နဲ့ စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ Desktop GTX 1660 Ti ရဲ့ Voltage Curve နဲ့ သွားတူနေပါတယ်။
ဒီတော့ Mobile GPU ဖြစ်လင့်ကစား ကျွေးထားတဲ့ Voltage အရမ်းများနေတော့ မလိုအပ်ဘဲ Temperature ထောင်တက်နေတယ်။ World War Z ကို Vulkan API ဖွင့်ပြီး အကုန် Max Out လုပ် 144fps နဲ့ ကစားတာ ၅ မိနစ်အတွင်း 86°C ကျော်တက်လာပါတယ်။
သိတဲ့အတိုင်း GS65 က Thin & Light ဖြစ်တော့ အပူတက်လွယ်တယ်၊ Palm Rest ပေါ် လက်တင်မရတဲ့ အခြေနေထိ ဖြစ်လာခဲ့လို့ ရေရှည်မကိုက်ဘူး Undervolted လုပ်မှ ရမယ်ဆိုပြီး MSI Afterburner App ကို အကူညီ တောင်းရပါတယ်။
Mobile GTX 1660 Ti GPU ရဲ့ Reference Frequency က 1,590 MHz ဖြစ်တော့ ဒီ Frequency တင်ပေးနိုင်တဲ့ အနည်းဆုံး Core Voltage ကို Heaven Engine 4.0 သုံးပြီး ၄ ၊ ၅ ခါမက စမ်းသပ်လိုက်တဲ့အခါ 700mV မှာတင် ပွဲသိမ်းသွားပါတယ်။
ဒီတော့ စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ တန်ဖိုးကြီး Gaming Laptop ဝယ်သုံးတဲ့အခါ တယုတယ ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ကျနော်က ဗဟုသုတ ဖြစ်စေဖို့ ပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် သုံးစွဲနေတဲ့ GPU မော်ဒယ်အလိုက် Undervolted လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဲ့လို 700mV နဲ့ 1,590MHz Run နိုင်တော့ စွမ်းဆောင်ရည် ထိခိုက်မှု လုံးဝမရှိတဲ့အပြင် Laptop ကလည်း အပူချိန်မများ အေးအေးလူးလူး တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါတယ်။ ဂိမ်း Non-stop ကစားတဲ့အခါ 70°C (Max 73°C) က မတက်တော့သလို AAA ဂိမ်းတွေကို Ultra Setting မှာ Frame Rate မြင့်မြင့်ကစားရတဲ့အတွက် ကျေနပ်စရာပါ။
ဒီတော့ Fan Speed ကို 100% သုံးတာထက် 50 ~ 60% နဲ့တင် လုံလောက်သွားတဲ့အတွက် Silent Gaming တွက် ရေလည်ကောင်းသွားပါတယ်။ (ချွင်းချက် – GPU အပူချိန် သာမန်ထက် လွန်ကဲနေမှ Afterburner နဲ့ Undervolted လုပ်ပါ)
Performance ပိုင်း ပြောလို့ဝသွားပါပြီ။ တတိယ Tab မှာ ထည့်ပေးထားတဲ့ Option က Battery အတွက်ပါ။ ကျနော့် GS65 ကို သေချာ Optimize လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် 60% Level မှာ အင်တာနက်သုံးရင်း စာရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ၅ နာရီနီးပါး အသုံးခံပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ၃ နာရီအထက် အသုံးပြုနိုင်လို့ Option မှာ 60% အထိပဲ အားသွင်းစေပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က အမြဲလိုလို ဂိမ်းကစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် 80% ၊ 100% တခါမှ မသွင်းပါဘူး။ တခါက ဖော်ပြဖူးတဲ့ ဆောင်းပါးမှာလို ဘက်ထရီ ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် 60% ကနေ 20% ကျန်တဲ့အထိပဲ သုံးတယ်။
40% ပဲ Battery Drain ပြီး 40% ပဲ ပြန်သွင်းတဲ့အတွက် ၃ ကြိမ်သွင်းမှ 1 Cycle ပြည့်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့ကနေ စသုံးလိုက်တဲ့ GS65 9SD ရဲ့ Designed Capacity 80,256 mAh အောက် လျော့မသွားတဲ့အပြင် Full Charged Capacity က 81,913 mAh ဖြစ်နေတာ ကျေနပ်စရာပါ။
စာဖတ်သူတွ အနေနဲ့ Battery Wear ဖြစ်တာနည်းချင်ရင် ကျနော့်ရဲ့ Battery အကြောင်းဆောင်းပါးကို ဒီ Link မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ MSI Dragon Center မှာ ပါဝင်တဲ့ Health Option ၃ မျိုးထဲက 100% Full Charge ကို အသွားလာ များတဲ့အခါ အားပြန်မသွင်းနိုင်ရင် အသုံးပြုပါ။
80% ပဲ အားသွင်းမယ်ဆိုတဲ့ Option က ခဏတာ သိမ်းဆည်းလိုတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် အလုပ်လုပ်ဖို့ ဘက်ထရီနဲ့ သုံးရမယ့်အခါ ရွေးချယ်ပါ။ 60% Option ကိုတော့ အမြဲ ပလတ်တပ်ပြီး အလုပ်လုပ်ရသူနဲ့ ဂိမ်းချည်းထိုင်ဆော့နေရင် အသုံးပြုပါ။
Dragon Center မှာ Enable လုပ်ထားရင် ဘာဂိမ်းပဲ ကစားကစား Gaming Mode က Auto အလုပ်လုပ်ပေးမှာပါ။ နောက်တစ်နည်း ပြောရရင် ကိုယ် Personalized (ရွေးချယ်ထားတဲ့ Performance Shift ၊ Nahimic Audio နဲ့ Visual ကအစ) မှတ်သားထားပြီး ကစားတဲ့ဂိမ်းအလိုက် ပြောင်းပေးသွားမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။
ဒီတော့ Gaming Mode ဖွင့်ထားရင် ကိုယ်နှစ်သက်ရာ Performance Mode ၊ Audio နဲ့ Visual Mode တွေကို ရွေးချယ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Game Centre နဲ့ တွဲပြောလိုတာက Audio အတွက် ထည့်ပေးထားတဲ့ Nahimic Software လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။
Microsoft Store မှာ သီးသန့် Download ဆွဲ အသုံးပြုရမှာဖြစ်သလို Audio Mode ကို Music ၊ Video နဲ့ Game စသဖြင့် ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ Visual ပိုင်းအတွက် အားဖြည့်ထားတာက MSI True Colour Feature ပါ။
အသုံးပြုနေတဲ့ Scenario အလိုက် Gamer ၊ Anti-blue ၊ sRGB နဲ့ Designer စသဖြင့် Colour Mode ၆ မျိုး အထိ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ပုံမှန်အတွက်ဆိုရင် sRGB Mode က အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး GS ၊ GE လို Colour Accurate Panel သုံးထားတဲ့ Gaming Laptop မျိုးအတွက် Designer Mode က အထိုက်လျောက် အားဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
The Dragon Dashboard 2.0
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဖော်ပြလိုတာက iOS နဲ့ Android မှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Dragon Dashboard လေးပါ။ စမတ်ဖုန်းနဲ့ Gaming Laptop ချိတ်ဆက်ပေးမယ့် App ဖြစ်ပြီး Connect လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် ဖုန်းနဲ့ Laptop တစ်ခုလုံးကို Monitoring လုပ်နိုင်ပါမယ်။
နောက်တစ်ချက်က Performance Shift နဲ့ Fan Speed ကို ဖုန်းကပဲ Control လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုပြောမလဲ အသုံးဝင်တယ်ပေါ့။ ဂိမ်းဆော့နေရင်း Windows နဲ့အပြင်ထွက်ကြည့်စရာမလိုဘဲ ဖုန်းကနေ Checking လုပ်နိုင်တာ တမျိုးကောင်းတယ် မဟုတ်ပါလား။
ဒီလောက်ဆိုရင် MSI Gaming Laptop တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ Dragon Center အသုံးပြုပုံနဲ့ Interface ပိုင်းကို နားလည်သွားပြီ ထင်ပါတယ်။
MSI Dragon Center Homepage
Samsung မှ လက်ဆေးဖို့ သတိပေးတဲ့ “Hand Wash’ ဆိုတဲ့ Smartwatch Application ကိုဖြန့်ချီ
HUAWEI P40 Pro 5G ကို ၁,၅၉၉,၀၀၀ ကျပ်နဲ့ Pre-order မှာယူနိုင်ပြီ